5th Generation: 9/16/07 - 9/23/07
UN ကို email ရေးပို့ ပေးကြဖို့အထူး မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
သူငယ်ချင်းရေ ကိုယ်တို့ချစ်တဲ့ရွှေနိုင်ငံတော်ကြီးမှာ သံဃာတွေ၊ ပြည်သူတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ အသက်၊ သွေး၊ ချွေးတွေနဲ့ ရင်းပြီး ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီးကို ဆင်နွှဲနေကြပါပြီ။ သူငယ်ချင်းလည်း ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီးမှာ တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
ဇော်ဂျီ၁ (Zawgyi1) ဖောင့်
We Want 3Fs
We want 3Fs. 3Fs we want. We want freedom. We want freedom for our future. We want friendship. We want friendship between our army and our people. We want food. We want food to live peacefully. အောင်ဝေး (မြန်မာ)
သပိတ် သပိတ် မှောက် မှောက်။ စစ်အဆိုးရ အလိုမရှိ အလိုမရှိ။ ပြည်သူ့အာဏာ ချက်ချင်းပေး ချက်ချင်းပေး။ ကျောင်းသားပြည်သူ လက်တွဲကူ သံဃာတွေရဲ့ ဓမ္မတိုက်ပွဲ။
ဂျင်ကာရေးပြောတာနားထောင်ပြီး ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့်တကွ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးသို့ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ အွန်လိုင်းပေါ်မှ တဆင့်စာပေးနိုင်ရန် ဒီမှာ နှိပ်ပါ။
အကယ်၍ မိမိ၏ email မှတစ်ဆင့် ရေးသားလိုပါက UN အလံကို နှိပ်နိုင်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက အောက်ပါစာသားများကိုကူးယူနိုင်ပါသည်။
I am writing to express my deepest concern over the recent protest and demonstration in Myanmar which lead by monks due to arrests, physical assaults, harsh treatment and unfair sentences by Junta towards the so-called peace-walkers who took on the streets to express their concern peacefully over the socio-economic situation in the country. As of date, more than 200 people are arrested and no one knows whereabouts of them despite affords made by the International Community.
Government-organised gangs, referred to as Swan-arshin, and members of the quasi-official Union Solidarity and Development Association (USDA) have broken up most of the protests and detained participants during the course of August 2007, under the guidance of local council officials, special branch police and army officials who are wearing plain clothes. They are not simply "pro-government" gangs as widely reported.
According to one news report, these para-militia are being coordinated byaMyanmar Armed Forces officer, Colonel Than Han, together with USDA secretary, U Aung Thaung. Col. Than Han is also said to have been involved in the lethal May 2003 attack onaconvoy carrying democracy leader Daw Aung San Suu Kyi and her supporters at Depayin in upper Myanmar.
Protests are now continued and spread across the country since 18 September 2007. As the protests and unrest accelerates, according to the sources inside, Junta is planning to use the Arm forces in near future to crackdown Monks and peaceful walkers.
At this critical time the active involvement of the international community is absolutely vital. We, People of Myanmar, are looking for and depending upon support from United Nations in order to prevent the bloodshed and slaughter of innocence by Junta in the Golden Land, Myanmar (Burma).
I therefore call upon you and all concerned agencies and mandates within the United Nations system to take special responsibility to oversee that Myanmar issue obtain the highest attention and priority in the days and weeks ahead.
posted by ပဉ္စမမြောက်မျိုးဆက် @ 10:13 PM
သပိတ် သပိတ် မှောက် မှောက်။ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အထွေထွေသပိတ်ကြီး ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
posted by ပဉ္စမမြောက်မျိုးဆက် @ 9:27 PM
မောင်လွမ်းဏီ၏ကဗျာအား မခင်မင်းဇော်နှင့် ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ ဆုံဆည်းရာဘလော့ဂ်များမှ မျှဝေခံစားပါသည်။
posted by ပဉ္စမမြောက်မျိုးဆက် @ 9:07 PM
မြန်မာ့မီဒီယာ၊ပညာရေးနှင့်ဖွံဖြိုးမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး မှ ပြန်လည်ကူးယူတင်ပြသည်။
posted by ပဉ္စမမြောက်မျိုးဆက် @ 12:03 PM
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး၏ ပြည်သူလူထုသို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လွှာ
“လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှုအပြည့်အ၀ရှိတဲ့ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို စည်းကမ်းရှိမှု ရင့်ကျက်မှုတို့ဖြင့် အရှိန်အဟုန်မြင့်ပြီး တောင်းဆိုရန်အတွက် ကျောင်းသားနှင့် ပြည်သူလူထုများ၊ အလုပ်သမား-လယ်သမားလူတန်းစားအသီးသီး၊ အမှုထမ်းအရာထမ်းအားလုံးနှင့် ပြည်သူ့တပ်မတော်သားများ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအပါအ၀င် ပြည်သူ့အကျိုးပြုဝန်ထမ်းအားလုံးကလည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရန် အထူးအရေးကြီးသောအချိန်အခါဖြစ်၍ လာမည့် (၂၄.၉.၀၇)နေ့လည် (၁)နာရီမှစတင်ကာ သံဃာတော်များနှင့်အတူလက်တွဲပြီး ကိုယ့်အခွင့်ရေးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စည်းကမ်းရှိစွာ စနစ်တကျ အကြမ်းမဖက်နည်းလမ်းဖြင့် အရှိန်အဟုန်မြှင့် တောင်းဆိုကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်”
posted by ပဉ္စမမြောက်မျိုးဆက် @ 10:40 AM
သူ့တယောက်ထဲကိုပဲ မွေးထားတဲ့ မိဘတွေအတွက်
သတင်းစာထဲမှာ မိသားစု တရားဟောလို့
ဒီလမ်း ဒီမြေ ဒီရေပေါ်မှာ...
အနီရောင် မပြယ်သေးတဲ့ ရောင်နီတွေ ကျန်သေးတယ်
ဒီခု ဒီနှစ် ဒီသက္ကရာဇ်တွေမှာ
ပေတရာမကတဲ့ ခြေရာတွေ ကျန်သေးတယ်
အရင်တုန်းက ပိုက်ဆံတွေကို စက္ကူလုပ်လိုက်လို့ (၁၉၈၈)
အခု စက္ကူတွေကို ပြာဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်လို့ (၂၀၀၇)
အင်္ကျီ၊ ပုဆိုး၊ ထမိန်(တကိုယ်လုံး) အားလုံး အနီရောင် ခပ်ရဲရဲ ၀တ်ခဲ့ကြရ
၈ လပိုင်းမှာ ဒီမိုကရေစီ
၈ လပိုင်းမှာ လူထုလှုပ်ရှားမှု
ဟိုဘက် ဒီဘက် လူ့ငပျက်တွေကြားမှာ
အော်ဆဲ၊ ၀င်ထိုး၊ ပုဆိုးချွတ်၊ ထမိန်ချွတ်၊ ကားပေါ်ပစ်တင်ခံကြရ
ပြည်သူ့ လက်ခုတ်သံနဲ့ ၀ါးရင်းတုတ်တွေ ကျိုးကျန်စေရမယ်
ပြည့်သူ့ဆန္ဒနဲ့ စနစ်ဆိုးကြီး မြေခစေရမယ်
ပြည့်သူ့အသံနဲ့ ဒီမိုကရေစီအလံ တင်ကြမယ်၊
posted by ပဉ္စမမြောက်မျိုးဆက် @ 9:52 AM
မြန်မာ့အနာဂတ်မျိုးဆက် (MFG Myanmar Future Generation) ၏ “မျိုးဆက်များ၏ပေါင်းစပ်ခြင်း” သီချင်း
ဒီမှာသီချင်းနဲ့ စာသား ဒေါင်းလုပ်ရယူပါ။
posted by ပဉ္စမမြောက်မျိုးဆက် @ 9:08 AM
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်၏ ကျောင်းသားပြည်သူအပေါင်းသုိ့ပန်ကြားချက်
“သံဃာတော်များက သာသနာ့အလံကိုကိုင်သလို ကျောင်းသားများကလည်း ကျောင်းသားအလံကိုကိုင်ပြီးချီတက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြပါ။ ပြည်သူများကလည်း သံဃာထုနောက်ကဖြစ်စေ၊ ကျောင်းသားထုနောက်ကဖြစ်စေ ရဲရဲရင့်ရင့် ပူးပေါင်းပါဝင်လိုက်ပါ ဆန္ဒဖောက်ထုတ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။”
posted by ပဉ္စမမြောက်မျိုးဆက် @ 8:47 AM
သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုမှ ကျောင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်ဖိတ်ခေါ်
“တိုင်းပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ ယခုအချိန် နအဖစစ်အဆိုးရ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်တယ်။ “နအဖအခက်၊ ပြည့်သူ့အချက်”ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို စွဲကိုင်ပြီး ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက ယိုင်လဲနေတဲ့ မတရားစစ်အဆိုးရရဲ့ အုတ်တံတိုင်းကြီးကို ပြိုင်တူတွန်းလွှဲဘို့ အချိန်ကောင်း အခါကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သံဃာတော်များရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက ကမ္ဘာကို တုန်လှုပ်သွားခဲ့ပြီ။ မျက်စိစုံမှိတ် ကြောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ဖိနှိပ်မှု ရက်စက်မှုတွေက အခုအခြေအနေထက် ပိုဆိုးလာမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒီအချိန်မှာ နိုင်ငံတကာကို အားကိုးတဲ့စိတ်ကိုကြောက်ပြီး ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက သံဃာတော်တွေနဲ့အတူ လက်တွဲပါဝင်ရင် နအဖစစ်အဆိုးရပြုတ်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲဘူး။ ပြည့်အင်အင်းဟာ ပြည်တွင်းမှာသာရှိတယ်။ တစ်ဦးကောင်းတစ်ယောက်ကောင်းနဲ့ တောင်းဆိုနေလို့ မယိုင်ဘူး။ ညီညာမှ ပြည်သာမှာ။ ဒီတော့ ရပ်ကြည့်မနေကြပါနဲ့။ သံဃာတော်များနဲ့အတူ စည်းကမ်းရှိစွာ ပူးပေါင်းလက်တွဲပါဝင်ကြဖို့ နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။” လွတ်လပ်မှုနဲ့ တရားမျှတတမှုကို လိုလားသူများ
posted by ပဉ္စမမြောက်မျိုးဆက် @ 2:46 PM
မြန်မာ့မျိုးချစ်တပ်မတော်သားများနှင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများသို့ ပန်ကြားလွှာ
posted by ပဉ္စမမြောက်မျိုးဆက် @ 2:28 AM
he has sacrifice his life for others
He encourage us to walk alongapath;
Labels: 88-Generation, hero, min ko naing, poem
posted by ပဉ္စမမြောက်မျိုးဆက် @ 5:59 PM
posted by ပဉ္စမမြောက်မျိုးဆက် @ 11:09 AM
Home: ခွပ်ဒေါင်းမြေ, သခင်နိုင်ငံတော်
About Me: ကျွန်တော် ခွပ်ဒေါင်းတစ်ကောင်ပါ။ ခေတ်အဆက်ဆက် ဖိနှိပ်မှုတွေကို ရှေ့ဆုံးကနေမာန်ဟုန်အပြည့်နဲ့တွန်းလှန်ခဲ့ကြတဲ့ ခွပ်ဒေါင်းမျိုးဆက်တွေရဲ့ ပဉ္စမမြောက်မျိုးဆက်ပါ။ အာဏာရှင်တွေ အာဏာသုံးပြီး ဖိနှိပ်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး လက်မမြှောက် ဒူးမထောက် အညံ့မခံပဲ တွန်းလှန်သွားမယ်လို့ ကတိသစ္စာပြုပါတယ်။
Let's Sign the Petition
ဗကသ တနှစ်ပြည့် ထောင်ထဲက ကဗျာ စက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ...
အုတ်မြစ်တွယ်သော အကြောက်တရားအား သခင်စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ခ...
တင်းကြပ်တဲ့လုံခြုံမှုတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အခြေအနေ ...
မစ္စတာဂမ်ဘာရီနဲ့ လုံခြုံရေးချထားမှု (မြန်မာစံတော်ချိ...
ပြည်မြန်မာသို့အိပ်ဖွင့်ပေးစာများ ကဒေါင်းညင်သာ ကလိုစေးထူး ကိုဇန် ဇင်အေး ကိုထိုက် မောင်ရင် မြင့်ဇေ ခင်မင်းဇော် အရှင်ကောဝိဒ စိတ်ဓါတ အိပ်မက်ဒိုင်ယာရီ ပြည်သူ့ရန်စွယ်များ ငြိမ်းချမ်းစွာလမ်းလျောက်ကြသူများ သန့်ဇင်အောင် ပုထုဇဉ် သဒ္ဒါ ကိုသင့် ရွှေမိုးတိမ် မေငြိမ်း ၉၆ မျိုးဆက် လင်းလက်ကြယ်စင် လွတ်လပ်မှုကိုတိုက်ယူမည်သူ့ မြန်မာ့ဘလောဂါများ မြန်မာ့မီဒီယာ၊ပညာရေးနှင့်ဖွံဖြိုးမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး စိန်ခလုပ် နစ်ခ်နေမန်း မျိုးချစ်မြန်မာ ကေသွယ် ရန်အောင် မိုးစက် ဖြူဖြူသင်းအားပေးသူ
နစ်နေမန်း၊ မျိုးချစ်မြန်မာ၊ ကိုထိုက်၊ ဆုံဆည်းရာနှင့်တကွ အားလုံးသောရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးရဲဘော်ဘလော့ဂ်များအား နအဖမှ ဘန်းလိုက်ခြင်းကို အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ရှုံ့ချပါသည်။ စစ်အဆိုးရ ကျဆုံးရမည်။ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ ဓမ္မရန်သူ ဤကမ္ဘာမြေမှ ပျောက်ကွယ်ရမည်။
© 2006 5th Generation .Template by Isnaini Dot Com